2 Kumkani 5 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Kumkani 5:1-27
5 Ke kaloku uNahaman othile,+ intloko yomkhosi kakumkani waseSiriya, waba yindoda enkulu phambi kwenkosi yakhe yaye ehlonitshwa kakhulu, ngenxa yokuba uYehova walunikela ngaye usindiso eSiriya,+ yaye le ndoda ngokwayo yayilikroti lendoda enamandla, nangona yayineqhenqa. 2 AmaSiriya ayephume aya kuba ngamatutu,+ yaye athimba intombazana encinane kwilizwe lakwaSirayeli,+ kwaye yayiphambi komfazi kaNahaman. 3 Ekuhambeni kwexesha yathi+ kwinkosikazi yayo: “Akwaba inkosi yam ibiphambi komprofeti+ oseSamariya! Ubeya kuyiphilisa kwiqhenqa layo.”+ 4 Ngenxa yoko othile waya waza wakuxela oko kwinkosi yakhe, esithi: “Ithe yathi ukuthetha+ intombazana evela kwilizwe lakwaSirayeli.” 5 Wandula ke ukumkani waseSiriya wathi: “Hamba! Yiza, mandithumele incwadi kukumkani wakwaSirayeli.” Ngoko wahamba waya kuthabatha kuye+ iitalente ezilishumi zesilivere namawaka amathandathu egolide+ nezambatho zokutshintsha ezilishumi.+ 6 Yaye wafika ezise incwadi+ kukumkani wakwaSirayeli, esithi: “Ke kaloku ngeli xesha lokufika kwale ncwadi kuwe, yabona ndithumela kuwe uNahaman umkhonzi wam, ukuze umphilise kwiqhenqa lakhe.” 7 Yaye kwathi kamsinya nje akuyifunda incwadi ukumkani wakwaSirayeli, ngoko nangoko wazikrazula+ izambatho zakhe waza wathi: “NdinguThixo yini na,+ ukuba ndibulale, nokuba ndiphilise?+ Kuba lo mntu undithumelela indoda ukuba ndiyiphilise kwiqhenqa layo; khanincede, niphawule nize nibone indlela afuna ngayo ukuxabana nam.”+ 8 Kwathi kamsinya nje akuba uElisha umntu kaTHIXO oyinyaniso evile ukuba ukumkani wakwaSirayeli uzikrazule izambatho zakhe,+ kwaoko wathumela kukumkani, esithi: “Uzikrazulele ntoni na izambatho zakho? Nceda, myeke eze kum ukuze azi ukuba ukho umprofeti kwaSirayeli.”+ 9 Ngoko uNahaman weza namahashe akhe neenqwelo zakhe zokulwa waza wema emnyangweni wendlu kaElisha. 10 Noko ke, uElisha wathumela umthunywa kuye, esithi: “Yiya, uze uhlambe+ umzimba izihlandlo ezisixhenxe+ eYordan ukuze inyama yakho ibuyele kuwe;+ uze uhlambuluke.” 11 UNahaman wacaphuka+ wemka waza wathi: “Ndiye ndazixelela ndathi,+ ‘Uza kuza kum aze eme, abize egameni likaYehova uThixo wakhe awangawangise ngesandla sakhe phezu kwale ndawo, amphilise oneqhenqa.’ 12 IAbhana neFarpare, imilambo yaseDamasko,+ ayilunganga ngakumbi na kunawo onke amanzi+ akwaSirayeli? Andinakuhlamba kuyo na ndize ngokuqinisekileyo ndihlambuluke?”+ Akutsho wajika wahamba enomsindo.+ 13 Ke kaloku abakhonzi bakhe basondela baza bathetha naye bathi: “Bawo,+ ukuba umprofeti ubethethe into enkulu kuwe, ubungayi kuyenza na? Kukangakanani ke ngoko, ekubeni ethe kuwe, ‘Hlamba umzimba uze uhlambuluke’?” 14 Waza wehla wangena eYordan izihlandlo ezisixhenxe ngokwelizwi lomntu kaTHIXO oyinyaniso;+ emva koko inyama yakhe yabuya yaba njengenyama yenkwenkwana+ waza wahlambuluka.+ 15 Wandula ke wabuyela kumntu kaTHIXO oyinyaniso,+ yena nalo lonke iqela lakhe, weza wama phambi kwakhe waza wathi: “Yabona, ndiyazi ngokuqinisekileyo ukuba akukho Thixo naphi na emhlabeni ngaphandle kwakwaSirayeli.+ Ke kaloku, nceda, yamkela isipho esiyintsikelelo+ esivela kumkhonzi wakho.” 16 Noko ke, wathi: “Njengoko uYehova endimi phambi kwakhe ephila,+ andiyi kusamkela.”+ Yaye wambongoza ukuba asamkele, kodwa wala. 17 Ekugqibeleni uNahaman wathi: “Ukuba akusamkeli, nceda, umkhonzi wakho makanikwe umhlaba,+ umthwalo weemeyile ezimbini; ngenxa yokuba umkhonzi wakho akayi kuphinda enze umnikelo otshiswayo okanye umbingelelo kubo nabaphi na abanye oothixo ngaphandle koYehova.+ 18 Wanga uYehova angamxolela umkhonzi wakho ngale nto: Xa inkosi yam ingena endlwini kaRimon+ ukuba iye kuqubuda apho, izixhase+ ngesandla sam, ndize nam ndiqubude+ endlwini kaRimon, xa ndiqubuda endlwini kaRimon wanga uYehova, anganceda amxolele umkhonzi wakho kule nkalo.”+ 19 Waza yena wathi kuye: “Hamba ngoxolo.”+ Ngako oko wemka wahamba umgama omde. 20 Wandula uGehazi+ umlindi kaElisha umntu kaTHIXO oyinyaniso+ wathi: “Yabona inkosi yam imyekile uNahaman+ umSiriya ngokungakwamkeli oko ebekuzise ngesandla sakhe. Njengoko uYehova ephila,+ ndiya kumsukela, ndithabathe okuthile kuye.”+ 21 Yaye uGehazi wamsukela uNahaman. Wathi uNahaman akubona ukuba kukho ubani obaleka emva kwakhe, kwaoko wehla kwinqwelo yakhe ukuze aye kumhlangabeza waza wathi: “Ngaba konke kulungile?”+ 22 Ke yena wathi: “Konke kulungile. Ndithunywe+ yinkosi yam+ isithi, ‘Khangela! Khona ngoku kufike kum abafana ababini bevela kummandla weentaba wakwaEfrayim koonyana babaprofeti.+ Nceda, ubanike italente yesilivere nezambatho zokutshintsha zibe zibini.’”+ 23 Yena uNahaman wathi: “Nceda uzithabathele iitalente zibe mbini.” Yaye waqhubeka embongoza,+ ekugqibeleni wabopha iitalente ezimbini zesilivere kwiingxowa ezimbini, nezambatho ezibini zokutshintsha, wazinika ababini kubalindi bakhe, ukuze bazithwale phambi kwakhe. 24 Ekufikeni kwakhe kuOfeli, ngoko nangoko wazithabatha ezandleni zabo waza wazibeka endlwini,+ wawandulula loo madoda. Emka ke ngoko. 25 Wangena yena waza wema ngasenkosini yakhe.+ Ke kaloku uElisha wathi kuye: “Uvela phi na Gehazi?” Kodwa yena wathi: “Umkhonzi wakho akakhange aye ndawo konke konke.”+ 26 Wathi ke yena kuye: “Intliziyo yam ayihambanga nawe na njengoko laa ndoda ibijika ukuze yehle enqwelweni yayo ikuhlangabeza? Lixesha lokwamkela isilivere na eli okanye lokwamkela izambatho okanye igcume lomnquma okanye izidiliya okanye izimvu okanye iinkomo okanye izicaka okanye izicakakazi?+ 27 Ngoko iqhenqa+ likaNahaman liya kunamathela kuwe nakwinzala yakho ukusa kwixesha elingenammiselo.”+ Ngoko nangoko wemka phambi kwakhe, eneqhenqa elimhlophe njengekhephu.+
2 Kumkani 5